निर्शत सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने नीजि बिद्यालयको निचोड – Sthaniya Patra
निर्शत सरकारी निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसकिने नीजि बिद्यालयको निचोड
By स्थानीय पत्र	 Last updated Apr 1, 2020
नवलपरासी १९ चैत्र – १६ गते नेपाल सरकारले नागरिकहरुलाई राहात दिने भन्दै धेरै निणर्यहरु ग¥यो जसमध्येको एक निर्णय हो – निजी विद्यालयको १ महिनाको शुल्क छुट गर्ने भनेर गरेको निर्णय । सो निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भएको छ ।
निजी विद्यालय कोरोना भाइरस (कोभिड १९)बाट प्रभावित भएकालाई सरकारले शनिबार राहत प्याकेज घोषणा ग¥यो । अभिभावकलाई राहत दिन सरकारले एक महिनाको शुल्क नलिन विद्यालयहरुलाई भनेको थियो । कोरोनाका कारण वार्षिक परीक्षा सरकारकै निर्देशन अनुसार चैत्र ५ गते भित्र नै सकिसकेका निजि विद्यालयहरुले अधिकाशंले त शुल्क पनि उठाइ सकेका छन् । सरकारले निजी विद्यालयहरुसंग कुनै पनि सरसल्लाह नगरी यो निर्णय भएको निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याव्सन) नेपालका टिकाराम पुरीले बताउनुभयो । पुरी भन्नुहुन्छ –“ हामीसंग कुनै पनि समन्वय नै नभई निर्णय भएको छ । हालको अवस्थामा सरकारको यो निणर्यको कार्र्नन्वयनमा समस्या छ ।निजि विद्यालयहरुका पनि आफ्नै समस्या छन् । सरकार सबै अभिभावक हो सरकारले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन गर्नका लागी सरकार ले निजि शैिक्षक संस्थाहरुलाई बैंकको एक महिनाको ब्याज , घरबाहल मिनाहा र शिक्षकरशिक्षीका तथा कर्मचारीहरुको तलब तथा सेवा सुविधाको विषयमा सरकारले व्यवस्थापन गर्नु पुरीले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय निजि तथा आवासिय विद्यालय अर्गनाइजेशन (एन–प्याव्सन) नेपालका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भन्नुभयो – सरकारले गरेको निर्णयको निर्शत रुपमा कार्यन्वयन गर्ने पक्षमा छैनौ । किनकी हामीले यो निर्णय लागु गर्न सक्दैनौ । निजि बिधालयका समस्यहरु पनि सरकारले सम्बोधन नगरे सम्म अहिलेको अवस्थामा निजि विद्यालयहरुको शुल्कको विषय कसरी आयो भनेर हामी अचम्मित भएका छौं । उहाँले प्रश्न गर्दै गर्नुभयो ।–“अभिभावकलाई राहात दिने विषयमा हामीसंग सरकारले समन्वय गरेर गएको भए अन्य विकल्पहरु आउन सक्ने थिए नि र? ”
यता नवलपरासीमा पनि निकै कठिन रहेको प्याव्सन नवलपरासीका अध्यक्ष इन्द्र गुरुङ्गले बताउनु भयो । उहाँ भन्नु हुन्छ –“यो निर्णयको कार्र्यान्वयनको समस्या रहेको छ किनकी अहीले अधिकाश विद्यालयहरुले शुल्क लिइसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा कसरी यो निर्णय मन्ने ? राज्यको कुरा मान्नु पर्छ तर म अहीलेको परीस्थितिमा राज्यले कुनै पनि विकल्प नै नदिइ यो निणर्य कार्र्यान्वयन गर्न सकिदैन ।”
पश्चिम नवलपरासीमा ६० करोडको लगानीमा गण्डक नहरको वृहत् मर्मतसम्भार हुँदै
सरावल गाउँपालिकाको कृषि शाखामा चोरी
खानेपानी सुरक्षा योजना टोलीद्धारा मुहान अवलोकन
हरिया चुरापोतेको पहिरनबीच शिव, स्वभाव र रूपान्तरण
आज नवलपरासीका दैनिक पत्रिकाका समाचार : अन्तराष्ट्रिय विश्व…
किसान नेता थापा पक्राउ , अविलम्ब रिहाई गर्न मोर्चाको माग